DHAGEYSO: Xildhibaan Goodir oo eedeyn u jeediyay xukuumada Soomaaliya - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka DHAGEYSO: Xildhibaan Goodir oo eedeyn u jeediyay xukuumada Soomaaliya
DHAGEYSO: Xildhibaan Goodir oo eedeyn u jeediyay xukuumada Soomaaliya
Sharciyadaasi ayuu xildhibaanka sheegay iney muhiim u ahaayeen dalka in la horkeeno xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya si u ansixiyaan ama wax ka badal ugu sameeyaan baarlamaanka.
Xildhibaan Goodir, wuxuu sheegay in xukuumada Soomaaliya mar hore u gudbiyeen sharciga axsaabta dalka, markii xildhibaanada gudi ay u saareen ay soo sameeyaan, taasi oo uu sheegay iney dib u dhac ku keeneyso horumarka dalka.
Sidoo kale wuxuu iska fogeeyay in xildhibaanada baarlamaanka dhankooda ka socon la’yihiin ansixinta sharciyo badan oo dalka muhiim u ah, wuxuuse sheegay in laga caga jiidayo ansixinta sharcigi muhiim ah ka hor doorashada sanadkaan ka dhaceyso dalka.
Axadii aan kasoo gudubnay ayaa madaxweynaha Soomaaliya oo la hadlayay baarlamaanka wuxuu si adag kaga hadlay da-dajinta ansixinta sharciyo baarlamaanka horyaala, laakiin hadalka xildhibaan Goodir ayaa u muuqda mid uu ku sheegayo in dhanka xukuumadana culeesyo badan ka jiraan.
Previous articleDHAGEYSO: Warka Subax ee Idaacada Risaala 10-02-2016
Next articleDHAGEYSO: Odowaa “Fursado Dhaqaalo lagu abuuri kari ayaan sameyneynaa”